Kordhin Loo Sameeyo Qaamuuska.com | Martech Zone
Kordhin loogu talagalay Qaamuuska.com
Arbacada, Agoosto 23, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Anigu waxaan ahay akhristaha xiisaha badan, laakiin waxaan ku xunyahay higaada, xarakaynta iyo naxwaha. Waxaan ku sii jeedaa Qaamuuska.com markii aan garan kari waayo waxa eray loola jeedo. Maanta markaan aqriyay Quip Quip on Goobo Joogto ah maanta, ma aanan ogeyn waxa uu ka hadlayo. Marka, waxaan ku leexday Qaamuuska.com waxayna heleen wajiga. Waxay umuuqataa mid weyn laakiin waxaan u maleynayaa inay midabada iga xadeen, in kastoo. (kaftan)
Haddana ma fahmin waxa loo yaqaan 'Plenary Snark'. Waxaan ku qasbanahay inaan aado Wikipedia si aan u fiirsado wax xasaasi ah, sidoo kale. tilmaan: iskudhis+xusuusin). Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn wax qosol badan markaad carrab la 'tahay.
Laakiin haye, Snon a Plane ayaa u muuqda mid wanaagsan, haah?
Macaamiisha ayaa dib ula dagaallamaya!
Grouper ma qaadan karaa suuqa fiidiyowga ee internetka?
Agoosto 23, 2006 saacaddu markay ahayd 4:28 PM
Haye Doug, waxaan ula jeeday si la mid ah "wax badan", laakiin inaan u dhawaaqo nooc u eg "diyaarad". In yar oo aad u hooseeya oo ku saabsan saamiga calaamadaha / buuqa ee leh feerkaas, ayaan filayaa.
Agoosto 23, 2006 saacaddu markay ahayd 5:02 PM
[Waan qoslayaa] Nah, Chip - Waxaan isku dayey inaan noqdo mid qosol badan, sidoo kale. Uguyaraan waan ogahay waxa loo dhan yahay hada!